3 siyaabood oo Suuqgeynta Dabiiciga ah ay kaa caawin karto inaad ka faa'iidaysato miisaaniyadaada 2022 | Martech Zone
3 siyood oo Suuqgeynta Dabiiciga ah ayaa kaa caawin kara inaad sida ugu fiican uga faa'iidaysato miisaaniyadaada 2022
Khamiista, Febraayo 3, 2022 Khamiista, Febraayo 3, 2022 Lindsay Boyajian Hagan
Miisaaniyadda suuq-geynta ayaa hoos ugu dhacday rikoorka ugu hooseeya ee 6% dakhliga shirkadda 2021, oo hoos uga dhacay 11% 2020.
Gartner, Sahanka Kharashka CMO ee Sannadlaha ah 2021
Iyadoo rajada laga qabo sidii hore oo kale, hadda waa waqtigii ay suuqgeynayaashu kor u qaadi lahaayeen kharashka oo ay u fidin lahaayeen doollarkooda.
Sida shirkaduhu u qoondeeyaan kheyraad yar suuq-geynta-laakin wali waxay dalbanayaan soo celin sare ROI-ma ahan wax la yaab leh in Kharashka suuqgeynta dabiiciga ah ayaa kor u kacaya marka la barbardhigo kharashka xayeysiiska. Dadaallada suuqgeynta dabiiciga ah sida hagaajinta mashiinka raadinta (SEO) waxay u muuqdaan inay ka kharash badan yihiin xayeysiisyada lacagta lagu bixiyo. Waxay sii wadaan inay keenaan natiijooyinka xitaa ka dib markay suuq-geyayaashu joojiyaan kharashka. Si fudud loo dhigo, suuq-geynta organic waa maalgashi caqli-gal ah oo lagu ilaalinayo isbedbeddelka miisaaniyadda lama huraanka ah.
Haddaba, waa maxay qaacidada? Si aad sida ugu badan uga faa'iidaysato miisaaniyadaada oo aad u horumariso hindisayaasha suuqgeynta dabiiciga ah, suuqgeynayaashu waxay u baahan yihiin xeelado kala duwan. Iyada oo isku dhafka saxda ah ee kanaalada-iyo SEO iyo iskaashiga sida diiradda udubdhexaadka ah - waxaad dhisi kartaa kalsoonida macaamiisha oo aad wadid dakhliga.
Waa maxay sababta Suuqgeynta Dabiiciga ah?
Suuqgeeyayaashu waxay inta badan dareemaan cadaadis si ay u keenaan natiijooyin degdeg ah, kuwaas oo xayeysiisyada lacag bixinta ah ay keeni karaan. Iyadoo raadinta dabiiciga ah laga yaabo inaysan kaa caawinin inaad ROI ku gaarto sida ugu dhakhsaha badan xayeysiisyada lacag bixinta, waxay wax ku kordhineysaa in ka badan kala badh dhammaan taraafikada mareegaha ee la raadin karo oo saamayn ku dhaw 40% dhammaan iibsiyada. Raadinta dabiiciga ah waa darawal muddada-dheer ee guusha suuqgeynta taas oo lagama maarmaan u ah kobaca ganacsiga.
Istaraatiijiyad korriinka dabiiciga ah waxay sidoo kale u soo bandhigtaa fursad ay suuqleydu ku dhistaan ​​xiriir waara oo macaamiisha ah. Kadib markaad su'aal gasho Google, 74% macaamiisha isla markiiba u rog xayaysiisyada lacagta lagu bixiyo oo ku tiirsan natiijo dabiici ah oo la aamini karo si aad uga jawaabto su'aalahooda. Xogtu been ma sheegto-natiijooyinka raadinta dabiiciga ah waxay kaxeeyaan taraafig aad uga badan xayeysiisyada lacagta lagu bixiyo.
Marka laga soo tago faa'iidooyinka wadista wacyigelinta sumadda iyo kalsoonida macaamiisha, suuq-geynta organic waa mid aad u qiimo badan. Si ka duwan xayaysiisyada lacagta la bixiyo, ma aha inaad bixiso kharashka meelaynta warbaahinta. Kharashyada suuqgeynta dabiiciga ah waa tignoolajiyada iyo xisaabaadka madaxa. Barnaamijyada suuq-geynta dabiiciga ah ee ugu wanaagsan waxaa wata kooxo guri-guri ah, waxayna isticmaalaan tignoolajiyada heerka-shirkadeed si ay u cabbiraan.
Xayeysiisyada lacagta lagu bixiyo maaha wax la soo dhaafay, laakiin suuqgeynta organic waa qayb weyn oo mustaqbalka ah. Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay sida Google wuxuu qorsheynayaa inuu meesha ka saaro cookies-ka qolo saddexaad 2023, hoos u dhigida waxtarka xayeysiiska lacag bixinta. Markaad ku darto hindisayaasha dabiiciga ah sida SEO qorshahaaga suuqgeynta, waxaad u badan tahay inaad la kulanto ujeedooyinka ganacsiga oo aad gaarto ROI sare.
Hagaajinta Xeeladaha Suuqgeynta Dabiiciga ah 2022
Qiimaha ay bixiso suuqgeynta organic waxay ka dhigaysaa qalab awood leh, gaar ahaan ururada leh miisaaniyad suuqgeyn xaddidan. Laakiin kobaca dabiiciga ahi waa mid lagu guulaysto oo kaliya istiraatijiyad sax ah. Si loo qiyaaso halka mudnaanta suuqgeyneed ee ururadu ay jiifto 2022, Agaasime la sahamiyay in ka badan 350 suuqgeyneed si ay wax uga bartaan qorshahooda sanadka oo ay ogaadaan isbeddellada kharash-bixinta.
Iyo, marka loo eego sahanka, mudnaanta ugu sarreysa ee hoggaamiyeyaasha dhijitaalka ah 12ka bilood ee soo socda waxaa ka mid ah khibradda isticmaaleyaasha websaydhka (UX), Suuqgeynta nuxurka, iyo iskaashiga xooggan ee u dhexeeya kooxaha.
Adigoo tan maskaxda ku haya, waa kuwan sida aad u qaadi karto hindisayaashaada heerka xiga oo aad uga faa'iidaysan karto miisaaniyadaada suuqgeyneed:
Ka faa'iidayso awoodda SEO. Suuqgeynta guusha leh waxay siisaa baarayaasha macluumaad ka jawaabaya su'aalahooda-waxa aan u tixraacno suuqgeyntii ugu horreysay ee macmiilka. Tan iyo labadaba B2B iyo B2C Go'aan-qaadayaashu waxay caadi ahaan ku bilaabaan safarkooda wax iibsiga cilmi-baaristooda, waxaa habboon in la maalgeliyo SEO. Laakin sheyga ereyga muhiimka ah ma kordhin doono qiimeynta raadinta. Mudnaanta sii cilmi baarista ereyada muhiimka ah iyo xisaab hubinta farsamada si loo hubiyo in makiinadaha raadinta ay si wax ku ool ah u tilmaami karaan nuxurka mareegaha.
Si loo kordhiyo saameynta, ku maalgeli madal suuq-geyneed organic iyo koox-guri SEO ah si loo hubiyo joogtaynta guud ee shirkadda ee nuxurka kanaalada leh xeeladaha SEO.
Iskaashi UX heer sare ah Sida laga soo xigtay digital madaxda, Ku haysashada UX togan ee mareegta summadaada ayaa muhiim u ah 2022-laakin suurtogal ma aha la-shaqeyn la'aan. Shaqaalaha shabakada, SEO, iyo doorarka nuxurka waxay heleen shakhsiyaad doorar kale ah inay noqdaan kuwo iskaashi ah in ka yar 50% wakhtigae. Xidhiidh la'aantan waxay si fudud u keeni kartaa shaqo nuqul ah, cilad-xumo, iyo dhaqamada SEO oo aan is waafaqsanayn. Qorshayaasha UX ee guusha leh waxay ku lug leeyihiin wada-xiriir joogto ah oo u dhexeeya waaxaha, oo muujinaya baahida loo qabo in la burburiyo silooska ururka. Gunno dheeri ah oo leh UX heer sare ah? Waxaa waxay wanaajisaa qiimaynta raadinta Google.
Cabbir natiijooyinka Mawduuca caadiga ah ee sahankayaga daaha ka qaaday waa baahida loo qabo in lagu cabbiro guusha barnaamijyada SEO ee 2022. Si joogto ah u qiimeynta waxtarka tignoolajiyada SEO iyo dhaqamada waxay ku wargelin kartaa mudnaantaada.
Naftaada wanaag u samee: Ka hor hirgelinta barnaamijkaaga SEO, go'aami cabbirada aad la socon doonto (tusaale, taraafikada, darajada ereyga muhiimka ah, iyo saamiga suuqa) iyo sida aad u cabbiri doonto natiijooyinka. Tani waxay awood kuu siinaysaa inaad hagaajiso macluumaadkaaga oo aad mudnaanta siiso hindisayaasha sida ugu fiican u shaqeeya—iyaga oo kuu badbaadinaya waqti iyo lacag.
Miisaaniyad suuqgeyneed oo la dhimay maaha inay macnaheedu tahay qorshe suuqgeyneed oo tayo hooseeya 2022- waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad hagaajiso agabkaaga. Istaraatiijiyad xooggan oo diiradda saareysa suuqgeynta dabiiciga ah, waxaad dhisi kartaa kalsoonida macaamiisha iyo wacyigelinta sumadda markaad wado dakhliga.
Ma rabtaa inaad wax badan barato? La soco warbixintii ugu dambeysay ee maamulaha:
Xaaladda Suuqgeynta Dabiiciga ah ee 2022
Tags: 202020212022sahan kharash sanadeed cmokaarigartnermiisaaniyadda suuqgeyntaistaraatijiyad koritaanka organicsuuqgeynta dabiiciga ahsuuqgeynta raadinta organicsoo noqoshada maalgashiga suuq geyntaromiayna search enginematoorada searchSEOxaaladda suuqgeynta organicux
Lindsay Boyajian Hagan waa VP ee Suuqgeynta kaari, waxa uu ka hadlayaa sida ganacsiyadu u abuuri karaan midaysan, xeeladaha suuq-geynta dhijitaalka ah ee omnichannel, oo aanay diiradda saarin hal kanaal oo gooni ah. Waxa kale oo ay si qoto dheer u qaadaa dhigataa sababta maal-gashiga suuq-geynta organic ay u kordhayaan iyo muhiimada ay u leedahay warshadaha.